Getabarcode – GS1 Myanmar
Welcome to GS1 Myanmar
စနစ်တကျဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘားကုဒ်နံပါတ်များယခုပဲလျှောက်ထားပြီး GS1 Myanmar အသင်းဝင်ဖြစ်နိုင်ပါပြီ။
ဘာလို့ GS1 ဘားကုဒ်များသုံးသင့်သလဲ?
Get truly unique barcodes
GS1 သည် နိုင်ငံတကာဘားကုဒ်နံပါတ်စနစ်နှင့် ဘားကုဒ်အသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်တို့အား ကမ္ဘာတဝှမ်းအသုံးပြုနိုင်အောင် စီမံခန့်ခွဲပေးနေခြင်းဖြစ်သည်။ အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့် မိမိတို့လုပ်ငန်းမှလျှောက်ထားသည့် GS1 ဘားကုဒ်နံပါတ်များမှာ မည်သည့်နိုင်ငံကမဆိုလက်ခံ၍အသုံးပြုနိုင်မည်မှာ အသေအချာပင်ဖြစ်သည်။
ဘားကုဒ်နံပါတ်များလျှောက်ထားပြီး GS1 Myanmar အသင်းဝင်များဖြစ်လာပါက ဘားကုဒ်နှင့် သက်ဆိုင်သောလိုအပ်သည့် စာရွက်စာတမ်းများနှင့် သင်တန်းများ၊ ဘားကုဒ်အားကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုတတ်စေရန် လိုအပ်သည့်ဆွေးနွေးပေးမှုများပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါသည်။
Our roots go back 40 years, to when the very first barcode was created. Today, we create and manage many other business standards, too.
GS1 Myanmar အကြောင်းပိုမိုသိရှိနိုင်ရန် လိုအပ်သည့်ဘားကုဒ်နံပါတ်များအား လျှောက်ထားပြီး အသင်းဝင်အဖြစ်ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့အနေဖြင့် အသင်းဝင်အဖြစ်လက်ခံပေးရန်နှင့် လူကြီးမင်းတို့သိရှိလိုသည်များကိုဖြေကြားပေးရန် အသင့်ရှိပါသည်။
More about GS1| GS1 isaregistered trademark of GS1 Myanmar. All contents copyright © GS1 Myanmar 2021.